မွန်ဂိုလီးယား, ထူးခြားဆန်းပြားသောခရီးသွားလုပ်ငန်း ခရီးသွားသတင်း
မြေပုံကိုကြည့်ပြီးမွန်ဂိုလီးယားကိုရှာပါ။ တရုတ်ပိုင်နက်နှင့်ရောထွေးမနေပါနှင့်၊ မွန်ဂိုလီးယားသည်ကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံဖြစ်သည် ဒါပေမယ့်တရုတ်နဲ့ရုရှားလိုအင်အားကြီးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေရှိတယ်။
Genghis Khan အကြောင်းကြားပြီးပြီလား ကောင်းပြီ၊ သူဟာမွန်ဂိုလီယန်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အင်ပါယာရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ တကယ်တော့တရုတ်မှာမွန်ဂိုဘုရင်တွေရှိတယ်။ ၎င်း၏နိုင်ငံရေးသမိုင်းသည်အတန်ငယ်ရှုပ်ထွေးသော်လည်းလွန်ခဲ့သောရာစုနှစ် ၁၉၂၀ ခုနှစ်များ မှစ၍ ဖြစ်သည် လွတ်လပ်သောနိုင်ငံဖြစ်သည် ပြီးတော့မင်းကြည့်နေရင် ထူးခြားဆန်းပြားနေရာများ... မင်းဒါကိုဘယ်လိုထင်သလဲ
၎င်းသည်ကြီးမားသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သော်လည်းတစ်ချိန်တည်းတွင်squareရိယာ၏စတုရန်းကီလိုမီတာတွင်လူ ဦး ရေအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်အများစုသည်ခြေသလုံးနှင့်တစ်ပိုင်းတစ်စဖြစ်ကာအများစုမှာမွန်ဂိုလူမျိုးစုများဖြစ်သော်လည်းတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများလည်းရှိသည်။
၎င်း၏ရှုခင်းများကလွှမ်းမိုးနေကြသည် Gobi သဲကန္တာရ, မြက်ခင်းနှင့်လွင်ပြင်။ သူ၏မြင်းများသည်ကျော်ကြားလှသည်။ သူတို့နှင့်အတူ Genghis Khan ကသူ၏အင်ပါယာကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ သူသည်သူ၏မြေးများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင်ယွမ်မင်းဆက်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သူ Marco Polo ကသူ၏ခရီးသွားခြင်းအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့သည်။
၎င်း၏မြို့တော် Ulaanbaatar ဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းရာသီရောက်ရင်အေးတဲ့မြို့။ သူတို့ဖြစ်နိုင်သည် -45 ºC! သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်ကတော့၊ စတာလင်အကျဉ်းသားတွေသူတို့ရဲ့ပြည်ပရောက်ပြည်ပရောက်အတွေ့အကြုံတွေကိုသင်မကြုံတွေ့ချင်မှမဟုတ်ရင်ဆောင်းတွင်းမသွားဘူး။
Genghis Khan အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သည် Ulaanbaatar ၏အနောက်တောင်ဘက် ၁၈ ကီလိုမီတာအကွာတွင်ရှိသည်။ Korean Air, Air China, Mongolian Airlines, Aeroflot နှင့် Turkish တို့ကအခြားကုမ္ပဏီများအကြားတွင်ပုံမှန်ပျံသန်းမှုကိုပြုလုပ်သည် ဂျာမနီ၊ ဂျပန်၊ ဟောင်ကောင်၊ တူရကီ၊ ရုရှားနှင့်တရုတ်နိုင်ငံတို့မှတိုက်ရိုက်ပျံသန်းနိုင်ပြီးကျန်ကမ္ဘာ့အခြားဒေသများနှင့်လည်းဆက်သွယ်နိုင်သည်.
သငျသညျလွန်းစွန့်စားလျှင် ကျော်ကြားတဲ့ Trans-Siberian ရထားရှိတယ်ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး ဘေဂျင်းမှစိန့်ပီတာစဘတ်အထိကီလိုမီတာ ၈၀၀၀ နီးပါးရှိပြီးရုရှားနယ်စပ်မှအူလန်ဘာတာမှတရုတ်နယ်စပ်သို့ဖြတ်သန်းသည့်မွန်ဂိုလိုင်းခွဲသည် ဘယ်ခရီးပဲ! မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံအတွင်းသို့စီးဆင်းသွားသောစုစုပေါင်းကီလိုမီတာ ၁၁၀၀ ဒီရထားနဲ့သွားတဲ့ခရီးကိုသွားရမယ့်နေရာထက်ကျော်လွန်ပြီးအတွေ့အကြုံကောင်းတစ်ခုပါ။ ဒါဟာ Ithaca ကိုသွားတဲ့ခရီးလိုပဲ
အများစုသည်မော်စကို - Ulaanbaatar - ပေကျင်းခရီးစဉ်ကိုရွေးချယ်ကြသည်။ မော်စကိုနှင့်အူလန်ဘာတာကြား ၅ ရက်နှင့်ပေကျင်းမှ ၃၆ နာရီဖြစ်သည်။ ရထားတစ်ခုစီတွင်ကုတင်လေးလုံးပါသောအခန်းကိုးခန်းပါရှိပြီးတစ်ခန်းလျှင်တစ်ခန်းလျှင်နှစ်ခန်းသာရှိသည်။ လက်မှတ်များကိုအွန်လိုင်းမှ www.eticket-ubtz.mn/mn မှ ၀ ယ်ယူပြီးတစ်လ ကြိုတင်၍ ၀ ယ်ရမည်။
ဒါပေမယ့် ဘယ်အချိန်မွန်ဂိုလီးယားကိုသွားသင့်သလဲ? ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ ဆောင်းရာသီကအရမ်းကြမ်းတမ်းတယ်။ ဒီမှာရာသီဥတုကအရမ်းပြင်းတယ်ဒါပေမယ့်နေကအမြဲထွန်းလင်းနေပြီးအရမ်းဆိုးပါတယ်။ မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံသည်ရက်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်နေရောင်ခြည်ကိုရရှိသောကြောင့်၎င်း၏တိမ်တိုက်များသည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးနီးပါးအပြာနေဆဲဖြစ်သည်။ အလှအပ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခရီးသွားရာသီသည်မေလမှစက်တင်ဘာအထိဖြစ်သည် သငျသညျကိုသတိရရမယ်ပေမယ့်ရာသီဥတုတိုင်းပြည်၏အစိတ်အပိုင်းအရသိရသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ဇူလိုင်လမှသြဂုတ်လအထိမိုးရွာသည်ဟုတ်တယ်၊
မွန်ဂိုလီးယားသို့သွားရန်အချိန်ကောင်းသည်ဇူလိုင်လအလယ်တွင်ဖြစ်သည်။ အဲဒီမှာလူတွေအများကြီးရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကျိုးနပ်ပါတယ် National Naadam ပွဲတော် အရာကျနော်တို့နောက်ပိုင်းမှာအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးသင်ဗီဇာလိုအပ်ပါသလား။ အချို့သောနိုင်ငံများကမူထိုသို့မပြုလုပ်သော်လည်းအများစုမှာမဟုတ်ပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဗီဇာကိုသံရုံးများနှင့်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးများ၌ပြုလုပ်သည် သင်၏နိုင်ငံတွင်မည်သူမျှမရှိပါကသင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ၌၎င်းသို့မဟုတ်၎င်းရောက်ရှိသည့်အခါ၎င်းကိုရရှိသောနိုင်ငံတစ်ခုတွင်သင်လျှောက်ထားနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ဘာသာစကားဖြင့်ရှုပ်ထွေးသည်။
ခရီးသွားဗီဇာရက်ပေါင်း 30 ဖြစ်ပါတယ် ၎င်းကိုသင်ရရှိပါကထုတ်ပေးရန်နောက်သုံးလအတွင်းအသုံးပြုရန်တရားဝင်သည်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမှာသူတို့ကဖိတ်ကြားစာကိုတောင်းတယ်။ ၂၀၁၅ အကုန်အထိအချို့နိုင်ငံများသည်ဗီဇာမှကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသော်လည်းခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။
မွန်ဂိုလီးယားကိုမြေပုံပေါ်တွင်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းအချက်များကို အခြေခံ၍ ကွဲပြားသောဒေသများသို့ခွဲခြားနိုင်သည်။ မြို့တော်သည်အလယ်ပိုင်းisရိယာတွင်တည်ရှိပြီး၎င်းသည်သင်၏တံခါးပေါက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤနေရာတွင်စာရင်းတစ်ခုဖြစ်သည် Ulaanbaatar မှာဘာကြည့်ရမလည်း
Sukhbaatar ရင်ပြင်။ ၎င်းသည်ပင်မစတုရန်းကြီးဖြစ်ပြီး၊ ထိုယောက်ျား၏ရုပ်တုကိုအလယ်တွင်ထင်ရှားကျော်ကြားပြီးမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဘဲလေးနှင့်အော်ပရာပြဇာတ်ရုံ၊ ယဉ်ကျေးမှုနန်းတော်နှင့်ပါလီမန်တို့ဖြစ်သည်။
ဂန္ဓန်ဘုန်းကြီးကျောင်း။ ၎င်းသည် ၁၈၃၈ ခုနှစ်မှစ၍ ၎င်း၏နေရာကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ တိုးတက်ကြီးထွားလာခဲ့ပြီးယနေ့တွင်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီး ၅၀၀၀ ခန့်နေထိုင်ကြသည်။ ကွန်မြူနစ်ဝါဒအောက်တွင်ခံစားခဲ့ရသောဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်သက်ဆိုင်ရာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းငါးကျောင်းဖျက်ဆီးခံရသည်။ ဆိုဗီယက်ယူနီယံပြိုကွဲမှုနှင့်အတူအရာအားလုံးဖြေလျော့ပေးခြင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းပြန်လည်တည်ထောင်ခြင်းနှင့်ယနေ့တွင်ဘဝများစွာရှိသည်။ ၎င်းမှာမီတာ ၄၀ မြင့်သောဗုဒ္ဓဖြစ်သည်။
ဂီတ Nacional က de Historia။ တိုင်းပြည်၏သမိုင်းကိုကျောက်ခေတ်မှ ၂၁ ရာစုအထိသိမ်းယူခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
သဘာဝသမိုင်းပြတိုက်အမျိုးသားပြတိုက်။ အတူတူပင်, သို့သော်နက်ရှိုင်းသောဒီဝေးလံသောမြေ၏သစ်ပင်ပန်းမန်, မန်များနှင့်ပထဝီကိုသိရန်။ ဒိုင်နိုဆောအရိုးစုများမလိုအပ်ပါ။
Bogd Khan နန်းတော်ပြတိုက်။ ကံကောင်းတာကဆိုဗီယက်တွေဟာ ၁၉၃၀ ပြည့်နှစ်တွေမှာသူတို့ ဦး ဆောင်ခဲ့တဲ့အဖျက်စွမ်းအားကိုမဖျက်ဆီးဘူး။ ၎င်းသည် Bogd Khan Winter Palace ဖြစ်ပြီးယနေ့တွင်ပြတိုက်ဖြစ်သည်။ အဆောက်အ ဦး သည် ၁၉ ရာစုမှစတင်ခဲ့ပြီး Bogd Khan သည်နောက်ဆုံးဘုရင်နှင့်သက်ရှိဗုဒ္ဓဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ဥယျာဉ်၌လှပသောဘုရားကျောင်းခြောက်ခုရှိသည်။
တိုတောင်းသောခုနှစ်တွင်, ဒီမြို့ကမ်းလှမ်းထားသည်, ဒါပေမယ့် ဆင်ခြေဖုံးတွင်သင်သည်အခြားနေရာများကြားတွင်အောက်ပါတို့ကိုသိနိုင်သည်:
တောင်ပေါ် Bogd Khan ကအမျိုးသားဥယျာဉ်။ ၎င်းသည်မြို့တော်၏တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီးအမှန်တကယ်ဥမင်ပုံများ၊ သစ်ပင်ပန်းမန်များနှင့်သတ္တဝါမျိုးစုံရှိသည့်တောင်တန်းဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်။ အတွင်းပိုင်းတွင် ၁၈ ရာစုမှဘုန်းကြီးကျောင်းဟောင်းတစ်ခုရှိပြီးဘုရားကျောင်း ၂၀ ခန့်နှင့်ချိုင့်ဝှမ်းအပေါ်ကောင်းမွန်သောရှုခင်းများရှိသည်။
Gorkhi-Terelj အမျိုးသားဥယျာဉ်။ ၎င်းသည်မြို့နှင့် ၈၀ ကီလိုမီတာအကွာတွင်တည်ရှိပြီးတောင်တက်ခြင်း၊ မြင်းစီးခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်းနှင့်အခြားအစရှိသည့်ပြင်ပခရီးသွားလုပ်ငန်းများစွာကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်ထူးဆန်းသောပုံသဏ္shapedာန်ရှိကျောက်ဆောင်များ၊ ထင်းရှူးပင်များဖုံးလွှမ်းထားသောတောင်များနှင့်တောရိုင်းပန်းများဖြင့်အစိမ်းရောင်မြက်ခင်းများပါသည့်လှပသောချိုင့်ဝှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Gun Galuut သဘာဝဘေးမဲ့တော။ တိရိစ္ဆာန်များ၊ ရေကန်များ၊ တောင်တန်းများ၊ မြစ်များနှင့်ရွာသားများကိုပင်သင်ကြိုက်နှစ်သက်လျှင်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ တူညီသောကြိုတင်မှာကြားထားအတွက်အရာအားလုံး။
ခူစိုင်သဘာဝထိန်းသိမ်းရေး။ မြို့တော်နှင့် ၉၅ ကီလိုမီတာအကွာတွင်ရှိပြီးကမ္ဘာပေါ်ရှိနောက်ဆုံးရိုင်းမြင်းများနေထိုင်ကြသည်။ သူတို့ကို ၁၈၇၈ တွင်တွေ့မြင်ခဲ့သောပိုလန်စူးစမ်းရှာဖွေသူနောက်မှယနေ့မျိုးသုဉ်းလုနီးပါးဖြစ်ပြီးနောက်၎င်းတို့သည်အကာအကွယ်ပေးသောမျိုးစိတ်များဖြစ်သည်။
မွန်ဂိုလီးယားနှင့်ပတ်သက်သောဤပထမဆောင်းပါးတွင်သင့်အားတိုင်းပြည်အကြောင်း၊ မည်သည့်နေရာသို့ ၀ င်ရမည်၊ သင်ဝင်ရန်လိုအပ်သည်နှင့်မြို့တော်နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိခရီးသွား most ည့်အများဆုံးနေရာများနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုသင့်အားပေးသည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲမွန်ဂိုလီးယားဟာကြီးမားလွန်းတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါတို့အတူတကွရှာဖွေတွေ့ရှိသွားမှာပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » ကြည့်ဖို့ဘာလဲ » မွန်ဂိုလီးယား, ထူးခြားဆန်းပြားခရီးသွားလုပ်ငန်း
မင်္ဂလာပါမာရီလာ၊ နေကောင်းလား ပထမ ဦး စွာ၊ မှတ်စုနှင့်သင်ထုတ်ဝေသောဒေတာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ လာမည့်နှစ်တွင်ရုရှားနိုင်ငံမှပီကင်းသို့ (မော်စကိုအတိအကျ) ပြောင်းရန်စီစဉ်နေပြီးမွန်ဂိုလီးယားတွင်ရက်အနည်းငယ်နေလိုပါသည်။ ဒါပေမယ့်မွန်ဂိုလီးယားမှာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာကမြို့နဲ့ဝေးတဲ့ကျေးလက်ဒေသခရီးသွားလုပ်ငန်း။ ဒီဟာနဲ့တခြားသတင်းအချက်အလက်တွေရှိလား။ ထိုကျော်ကြားသောရွက်ဖျင်တဲများ၌စခန်းချခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။